ကားအင်ဂျင်ကို သင်ကြားပေးခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » ကားအင်ဂျင်ကို သင်ကြားပေးခြင်း
Posted by TT on Oct 1, 2012 in How To.., Know-How, DIY | 12 comments
PCM Idle Learn Procudure
ယခုနှစ်ထဲမှာ များပြားလာတဲ့ မိုဒယ် မြင့်ကားသစ်ပိုင်ရှင်များအတွက် အလွယ်တကူ ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ (လုပ်သင့်တဲ့) ကားထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်မှု တစ်ခုကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း မိုဒယ် များမှာ အင်ဂျင်ဆီပေး စနစ်မှာ ကာဗျူရက်တာ (Carburettor) လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်ဆီ နှင့် လေပေါင်းစပ်ပေးတဲ့ ကိရိယာ မပါဝင်တော့ဘဲ အင်ဂျင်ထိန်းချုပ်တဲ့ ကွန်ပျုတာ ECU (Engine Control Unit) ခေါ် PCM (Powertrain Control Module) က အာရုံခံကိရိယာများကိုပေးတဲ့ အချက်အလက်များကို အခြေခံ တွက်ချက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဆီပမာဏကို ဆီပန်းကိရိယာ (Fuel Injectors) များမှ တစ်ဆင့် အင်ဂျင်တွင်း ကိုတိုက်ရိုက် ပေးပို့စေပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ ဆီပမာဏကို တွက်ချက်ရန်
– အင်ဂျင်အအေးပေးစနစ်/အပူချိန် (Coolant Temperature)
– ဆီလိုင်းဖိအား (Fuel Presssure)
– အင်ဂျင် လေ၀င်ပေါက် (Inlet Manifold) မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဟာနယ် အခြေအနေ (Vacuum Condition)
– ယာဉ်မောင်း လီဗာနင်းလို့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေ၀င်ပေါက် အကျယ် ပမာဏ (Throttle Position)
– အိတ်ဇော မီးခိုး မှာ ပါဝင်နေတဲ့ ဆီ/လေ အာရုံခံကိရိယာ (Oxygen Sensor) မှပေးပို့တဲ့ အချက်အလက် စတဲ့ အချက်အလက်များကို တွက်ချက်ပြီး အကောင်းဆုံး ဆီ/လေ အချိုး ရရှိရန် ဆီပမာဏ မည်မျှပေးရမည်ကို PCM ကဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် PCM နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော battery power ပြတ်တောက်ခဲ့ လျှင် CPM ရှိ အခြေခံ ကွန်ပျူတာ အစီအစဉ်သည် အနည်းငယ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။
မူလစက်ရုံထုတ် အခြေအနေကိုရရှိရန် PCM ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်သင်ကြားပေးရပါမည်။
အင်ဂျင်အနှေးလည် (Idle Speed) အခြေအနေတွင် အနည်းဆုံး ပေးရမည့်ဆီပမာဏကို အင်ဂျင်ထိန်းချုပ် ကွန်ပျုတာက သိရှိနားလည်ပြီး ၄င်းကို အခြေခံ၍ ဆီပေးစနစ်ကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင် စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
1) ကားသော့ကို ဖြုတ်ထားပါ။
2) ဖြူးစ်သေတ္တာမှ PCM သို့ ဆက်သွယ်သော ဖြူးစ်ကို စက္ကန့် (20) ခန့် ဖြုတ်ထားပါ။
ဘက်ထရီ အမငုတ် (-)ကို ဖြုတ်ပြီး အနည်းဆုံး စက္ကန့်(20) ထားပြီးပြန်တပ်ပါ။
3) ကားအတွင်း အသုံးပြုသော လျှပ်စစ် ခလုတ်များ (မီး/အဲကွန်း/ရေဒီယို စသည်တို့) အားလုံးကို ပိတ်ပါ။
4) ဂီယာကို P သို့မဟုတ် N တွင်ထားပါ။ ကားသော့ကို နှစ်ချက်လှည့်၍ ON Position တွင် နှစ်စက္ကန့် ထားပြီး အင်ဂျင်နှိုးပါ။
5) အင်ဂျင်လည်နှုန်း တစ်မိနစ် သုံးထောင် (3000 rpm) တွင် ရှိစေရန် လီဗာနင်း၍ ထိန်းထားပြီး အင်ဂျင်အပူချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။ အင်ဂျင်အပူချိန် မြင့်တက်လာပြီး 10 မိနစ်ခန့် ကြာလျှင် ရေတိုင်ကီပန်ကာလည်သံ စတင်ကြားရပါက လီဗာကို လွှတ်လိုက်ပါ။ (အင်ဂျင်၏ အလုပ်လုပ်ရန် အကောင်းဆုံး အပူချိန် ရောက်ရှိပြီး အင်ဂျင် (Idle Speed)အနှေးလည်ခြင်း စတင်ပြီဖြစ်ပါသည်။)
6) ရေတိုင်ကီပန်ကာ ရပ်သွားလျှင်အချိန်စတင်မှတ်ရပါမည်။ အနှေးလည်ခြင်း ၅မိနစ်ပြည့်အောင် ထားရပါမည်။ ၅မိနစ်အတွင်း ရေတိုင်ကီပန်ကာလည်ပတ်လျှင် ၄င်းလည်ပတ်ချိန်များကို မှတ်သားပြီး ထပ်ပေါင်းရပါမည်။ ထိုအချိန်အတွင်း မည်သည့် လျှပ်စစ် အားသုံးပစ္စည်းများ/မီးများ ကိုမသုံးရပါ။
ကားအတွင်း အချိန်ပြည့် ထိုင်နေရမည်ဖြစ်ပါ၍ အစီအစဉ်မစမီတွင် ပြူတင်းတံခါးများ ကြိုတင် ဖွင့်ထား၍ရပါသည်။
အချိန်မှတ်နေစဉ်အတွင်း တံခါးဖွင့်ပါက အချက်ပြမီးလင်းခြင်း၊ အတွင်းခန်းမီးလင်းခြင်းဖြစ်နိုင်၍ လုံးဝမဖွင့်ရပါ။
ရေတိုင်ကီ ပန်ကာလည်ပတ်ချိန်နှုတ်ပြီး အင်ဂျင်အနှေးလည်ပတ်ချိန် ၅ မိနစ်(စုစုပေါင်း ၈ မိနစ်ခန့် ကြာနိုင်ပါသည်။) အစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ အစီအစဉ်ကို အောက်ပါခြေအနေ တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ပါက ပြန်လည်ပြုလုပ်ရမည်။
-အင်ဂျင်မှ အီလစ်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ (PCM/ Sensors) ပြုပြင်လဲလှယ်ရန်(သို့) အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဘက်ထရီဖြုတ်ခဲ့ရလျှင်
– ကြာမြင့်စွာ ရပ်ထားခဲ့ရ၍ ဘက်ထရီအားကုန်ပြီး အကူဘက်ထရီဖြင့်ပြန်နှိုးခဲ့ရပြီးလျှင်
– PCM/ Throttle body လဲလှယ်ပြီးလျှင်
၄င်းအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဆီစားနှုန်းသက်သာခြင်း၊ မောင်းနှင်ရ ပေါ့ပါးသွက်လက်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိပါမည်။
Reference : Hondasuv.com/forum/
ကားအကြောင်း ဂ ဃ န ဏ မသိသေးလို့..အင်ဂျင်အလုပ်လုပ်ပုံ.
သိချင်နေတာ ကြာနေဘီ မို့…
ဂလိုပို့စ်လေး တင်ပေး.ရှယ်ပေးတာ ကျေးကျေးပြုရင်း.
ပရင့်ထုတ်ပီးကို ..မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်. နော့…
Its need Idle running 5min nett on no load condition.
If radiator run during that period, ( may be 2~3 times , 1min each ) you will have add these time to operation time , ie total idle run time will be 7~8 min.
တစ်ရက်က ဘောစိရဲ့ ဖပြုတ်လေး ပလက်လဲတာ တစ်ပုံးကျော် လစ်သွားတယ် ဘယ်လိုမလစ်အောင်ဆိုတာလေး ပြောပေးနော
Spark plug price are 1500ks for NGK copper, 3,000ks for NGK platinum,13,000ks for Denso Iridium .
Some car use2plugs on each cylinder. So cost on user’s choice.
ဒီမှာတော့.. ဆီလဲ.. ရေလဲ..ဘာလုပ်လုပ်.. လုပ်ပြီးရင်.. ကားကွန်ပျူတာကို စက်ကလေးတပ်ပြီး.. မူရင်းအတိုင်းရီဆက်ပြန်လုပ်လိုက်တယ်..။
ရီဆက်တင်မက.. လိုတာတွေအကုန်လည်း .. လက်ကိုင်ကွန်ပျူတာလေးနဲ့.. ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်.
ဒီခေတ်ကားတော်တော်များများ.. အင်ဂျင်ပူအောင် စောင့်ဖို့မလိုတော့ပါကြောင်း..
အခု ရန်ကုန်မှာ Honda အမျိုးအစား ကားတွေ ၀င်လာတယ် … ကွန်ပျူတာစစ်စတန်နဲ့ အကုန်ထိန်းချုပ်ထားတာမို့လို့ ရန်ကုန်က ၀ပ်ရှော့တွေမှာ ပြင်လို့မရသေးဘူး … Honda ကားအကြောင်း သေချာနားလည်ပြီး ပြင်ပေးတတ်တဲ့ ၀ပ်ရှော့များသိရင် ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ် …
Honda Car Service ,Pyay road,7mile.
1) its for who interest DIY in Myanmar ,most car owners do not have OBDII scanner or computer software .
2) In future , American people may not needadriver foracar.
အကြံဥာန် ကတစ်မျိုးကြီးမဖြစ်ပါဘူး နေ၇ာတိုင်းတော့ ခင်ဗျားတို့အမေ၇ိက လိုမပာုတ်ဘူးလေ။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ အထက်မှာေ၇းထားတဲ့အချက်တွေကတော့ တန်းမောင်းလို့၇၇မ၇၇
အကုန်လုံးက ဒီခေတ်ကားတွေစီးနေနိင်တာမှာမပာုတ်။ ပာုတ်တယ်ပာုတ်
ကိုတီတီရေ အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျာ… ကျွန်တော်လဲ Software သမားပါ အဲလို ကား System ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာ
ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ အခု ကိုတီတီက ဘာလုပ်ပါသလဲ…. အဲလို ကား System ကိုနားလည်ရင် အလုပ်လုပ်နေရင် ကျွန်တော်တို. လာရောက်လေ့လာ ဆွေးနွေးလို.ရမလား သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ….
ကျွန်တော် အဲဒီအကြောင်းကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားလို.ပါ….
I am not an expert, just sharing info for some car users in Myanmar.
and also not working in that business.
You are welcome , ( I am an mech: engr having KG knowledge in ICT )